Asia Coronavirus COVID-19 Kwidziridzo: Zvifambiso zvekufamba, Mamiriro Ezvino
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » Asia Coronavirus COVID-19 Kwidziridzo: Zvifambiso zvekufamba, Mamiriro Ezvino
Airlines • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Cambodia Kuputsa Nhau • Hong Kong Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Indonesia Kuputsa Nhau • Japan Kuputsa Nhau • Laos Kuputsa Nhau • Malaysia Kuputsa Nhau • Myanmar Breaking Nhau • nhau • chengetedzo • Singapore Kupwanya Nhau • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau • Vietnam Kuputsa Nhau
Asia Kwidziridzo paCoronavirus COVID-19: Kurambidzwa kwekufamba uye Mamiriro Ezvino
Mukutanga kwaNdira 2020, sumbu remabayo mabayo echikonzero chisingazivikanwe chakaonekwa muWuhan City, Hubei, China. Izvo zvinoguma COVID-19 coronavirus zvakatungamira kumatare anodarika 95,000 54,000 akasimbiswa pasi rese. Pane idzi dzakasimbiswa kesi, iyo yakazara nhamba "yakadzoreredzwa" ingangoita 50. Kubva pakati paKukadzi, mwero wekupora wakanyanyisa kuwedzera (pamusoro pe19%), nepo nyaya dzichangotaurwa dzichinyatsojeka kudzikira. Asia Coronavirus COVID-XNUMX inogadziridzwa yaburitswa neKufamba Asia (DA).
Pakati penzvimbo gumi nenhatu dzinoongororwa neDA, parizvino hapana mamiriro akasimbiswa eCOVID-11 muMyanmar, Laos, kana chitsuwa cheBali. Thailand, Vietnam, Cambodia, neMalaysia vakanyora pasi pegumi neshanu nyaya dzakasimbiswa pamwe chete - vanhu 19 vakapora zvizere. Sangano reUS Centers for Disease Control and Prevention (CDC) muna Kukadzi 110, rakabvisa Vietnam kubva pamazita enzvimbo dziri panjodzi yekuparadzirwa kwenharaunda kweECVID-70 ichidoma zviito zveVietnam zvakazara kurwisa denda iri.
Singapore neHong Kong vakanyora zvinopfuura zana zana imwe neimwe, uye Japan iri padyo ne100. Zano paAsia Coronavirus COVID-330 inoratidza kuti vafungezve zvese zvisina kukosha kuenda kuChina kusvika Chivabvu. Kune dzimwe nzvimbo dzese, DA iri kubata mabhuki senguva dzose. Hupenyu munzvimbo idzi dzinoenderera seyakajairika, uye kunze kweChina, kufamba uchitenderera dunhu kunoramba kuri nyore.
Kunze kweChina, zvese zvirongwa zvekufamba zvinogona kuenderera sezvazviri. Hapana zvirambidzo zvekufamba zvakapihwa neWHO kana hurumende dzenyika pakati pedzimwe nzvimbo munzvimbo yedu. Panzvimbo pekumisa chero marwendo akarongwa, DA inokurudzira kugadzirisa zvekare.
Kupindura mibvunzo ine chekuita ne COVID-19
Nezve razvino ruzivo uye chengetedzo kuraira, iyo WHO inopa akati wandei mavhidhiyo anodzidzisa uye anodhinda zviziviso zvekutora kubva pano.
IWHO zvakare inopa mamiriro ezuva nezuva mamiriro ane chaiwo manhamba pazviitiko zvakasimbiswa uye kugoverwa kwe COVID-19. Iyo yazvino (4 Kurume) inogona kutariswa pano.
Kwidziridzo pane zvakajairwa kufamba
Asia Coronavirus COVID-19 inogadziridza parizvino zvirambidzo zvekufamba zvine chekuita nenyika dzese padandemutande reDA rakanyorwa nevazhinji vachiisa miganho pakufamba kubva kuChina.
Vafambi vese zvisinei nenyika dzinobva kuchamhembe kweChina vachipinda muHong Kong vanofanirwa kuenda kunzvimbo inofanirwa kugara kwavo kwemazuva gumi nemana. Izvi zvinoshandawo kune vafambi vakashanyira Emilia-Romagna, Lombardy kana nzvimbo dzeVeneto muItari kana Iran mumazuva gumi nemana apfuura. Vafambi vakashanyira South Korea mukati memazuva gumi nemana ekusvika kuHong Kong havazobvumidzwa kupinda. Chief Executive yazivisa kumiswa kwema immiging services kuKai Tak Cruise Terminal uye Ocean Terminal, nekudaro hapana ngarava dzezvikepe dzinotambirwa kudzamara kuziviswa. Panguva ino, kuyambuka muganho kwese kwakavharwa, kunze kwenzvimbo yekubatana yeShenzhen Bay, Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge uye nhandare yenyika. Parizvino, Hong Kong Disneyland, Ocean Park, Ngong Ping 14 Cable Mota, uye Jumbo Floating Restaurant yakavharwa kudzamara kuziviswa.
ONA: World Rugby yazivisa kusarudzwazve kweCathay Pacific / HSBC Hong Kong Sevens. Mutambo uyu, wekutanga musi wa 3-5 Kubvumbi, wave kutambirwa kuHong Kong Stadium kubva 16-18 Gumiguru, 2020.
Dare remakurukota e Sabah neSarawak rakarambidza ndege dzese kubva kuChina. Kurambidzwa hakuna kuiswa nenyika yeMalaysia. Nyika yeSarawak yakazivisawo kuti chero munhu anopinda muSarawak anga ave kuSingapore anofanira kuzviparadzanisa pamba kwemazuva gumi nemana. Vatorwa vese vekunze vakashanyira Daegu City kana Cheongdo County muNorth Gyeonsang Province muRepublic of Korea, mukati memazuva gumi nemana ekusvika kuMalaysia (kusanganisira Sarawak) havazobvumidzwa kupinda. Iyo KLCC Management inoda kuti vese vashanyi kusanganisira vana nevacheche kuti vapedze fomu reHealth Declaration vasati vashanyira Skybridge muKuala Lumpur (kutanga kubva muna 14 Kukadzi) kudzamara kuziviswa.
Vatorwa vekunze vakashanyira Hubei uye / kana matunhu eZhejiang kuChina; kana Daegu Guta kana Cheongdo County muNorth Gyeonsang Province muRepublic of Korea, mukati memazuva gumi nemana ekusvika muJapan, haizobvumidzwe kupinda. Nezvekuvandudzwa kwazvino kwenzvimbo dzakavharwa muJapan, ndapota nyorera wako Anopa mazano Asia Japan.
Hurumende yeIndonesia yakazivisa kurambidzwa kwendege kuenda nekudzoka mainland China kubva 5 Kukadzi zvichienda mberi uye haizobvumidze vashanyi vakagara muChina mumazuva gumi nemana apfuura kuti vapinde kana kufamba. Iyo yemahara-vhiza mutemo wevaChinese vagari yakamiswa kwenguva pfupi.
Vietnam yehurumende yevamiriri vezvemhepo inomisa nendege dzese pakati penyika China neVietnam. Vafambi vendege vanobva kunyika dzine nyaya dzakataurwa dze COVID-19 vanofanirwa kuendesa chirevo chehutano pavanopinda muVietnam. Masuwo akati wandei emuganhu pakati peVietnam neChina mudunhu rekuchamhembe kweLang Son anoramba akavharwa. Ndege dzinoverengeka dzakambomisa kufamba kwenguva pfupi pakati peSouth Korea neVietnam. Vese vekunze vakashanyira Daegu City kana Cheongdo County muNorth Gyeonsang Province muRepublic of Korea mukati memazuva gumi nemana vacharambidzwa kupinda.
Vatorwa vekunze vakashanyira mainland China, Iran, kuchamhembe kweItaly kana South Korea, mukati memazuva gumi nemana kubva pakusvika muSingapore havazobvumidzwa kupinda kana kufamba.
Lao Airlines yakambomisa nzira dzinoverengeka dzinoenda kuChina. Hurumende yeLao yakamira kupa mavhiza evashanyi kunzvimbo dzinotariswa pamuganhu neChina.
Chirevo chakaburitswa nebazi rezvehutano muThailand musi wa3 Kurume chakakonzera nyonganiso. Chirevo ichi chakataura nezveGerman, France, Italy, Iran, China, Taiwan, Macau, Hong Kong, Singapore, Japan, neSouth Korea dzakatarwa senjodzi huru, uye kuti vafambi vanobva munzvimbo idzi vaizogariswa kwavo vega. Parizvino, izvi hazvina kuiswa. Nezve ichangoburwa mamiriro emamiriro ekufamba kubva kuThailand, ndapota tarisa kune Tourism Authority yeThailand webhusaiti.
Parizvino, hapana zvirambidzo zvekufamba pakati penyika idzi neChina.
Kuti uwane mamwe mavhidhiyo uye mazano ezvekuchengetedza matanho ekurwisa COVID-19, shanyira iyo WHO website.